Warmly Welcome: ထီးဖြူဆောင်းမယ့်သူ
¿De que estas Hecho? said...
GrAcIaS X VIsiTaR MI BLoG! (Y)... saludos .. cuidate... !
ခင်ဗျား post လေးကို သဘောကျလို့ Shared Items ထဲမှာ ထဲထားတယ်ဗျ..
သင်ခန်းစာယူစရာ ပို့စ်ကောင်းလေးပါပဲ မောင်လေးရေ။ ဟုတ်ပါတယ်... တခါတလေ လူတွေဟာ “ကံဆိုတာ အလုပ်” ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပြီး စိတ်ကူးတွေ ထဲမှာပဲ ပျောက်ဆုံးနေတတ်ကြပါတယ်။ ပို့စ်လေးကပေးတဲ့ message အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
“ကံကိုယုံ၍ ဆူးခြုံမနင်းရ” ပေါ့ဗျာ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ပို့စ်လေး။
ပေးချင်တဲ့ message ကို ကွက်တိပဲ။ ကျေးဇူးပါ။